इलाम नगरपालिकाका मेयर महेश बस्नेत २०५४ सालमा पनि यही नगरको मेयर थिए। २० वर्षपछि गत मंसिर १४ मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्ना त्यतिबेलाकै प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति हिमालय कर्माचार्यलाई पराजित गरी चर्चामा आएका बस्नेत अहिले ‘जति धेरै बच्चा जन्मायो, उति धेरै सुत्केरी सुविधा दिने’ नगरपालिकाको निर्णयले पुनः चर्चामा छन् । नगरको यो निर्णयबारे केही दिनअघि संघीय संसद्मा समेत कुरा उठेको थियो । स्थानीय तहको काम कसरी चल्दैछ, इलाम नगरले सुत्केरीलाई सुविधा बढाउने नीति किन लियो लगायत विषयमा मेयर बस्नेतसँगको कुराकानी:
तथ्यांक पनि हेर्नुपर्छ । जनसंख्याको नीति बाइबल, कुरान, वेद, गीतामा लेखिएजस्तो होइन । जसले रटेर विद्वता छाँटिरहनुभएको छ, उहाँहरूले जनसंख्या चलायमान छ, जनसंख्याको नीति समयअनुसार परिवर्तन गरेर जानुपर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, चीनमा हिजो एक परिवारमा एक सन्तानको नीति आयो । अहिले चीन त्यो नहुनेरहेछ भनेर २ सन्तानमा गएको छ, चीनको नीति बाइबल, कुरान, वेदजस्तै भयो ? आज हाम्रो देशको जनसंख्याको स्थिति, नीति, संवैधानिक अवस्था हाम्रा नेता र विद्वानले हेरेका छन् ? यसलाई समयानुसार परिभाषित र सापेक्षित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो । अहिले इलाम नगरमा वार्षिक वृद्धिदर ०.५९ प्रतिशतमात्रै छ । ५ वर्षको विश्लेषण गर्दा नगरपालिकामा ४ हजार केटाकेटी घटेछन् र ३ हजार वृद्धवृद्धा बढेछन् ।
जनसंख्या कता जाँदैछ, प्रतिनिधित्वको आधार भनेको पहिला जनसंख्या अनिमात्र भूगोग हो । प्रदेश १ र प्रदेश २ को प्रतिनिधित्व संख्या, स्रोत–साधन बाँडफाँटको तुलना गरिहेरौं न । पहाडमा जनसंख्या थाम्ने, टिकाएर राख्ने नीति खोइ ? राजधानीहरू सबै तराईमा केन्द्रित हुँदा पहाड उजाड बन्दैछ । प्रतिनिधित्वमा हामी कमजोर बन्दैछौं । संविधानले हरेक १० वर्षमा जनसंख्या र प्रतिनिधित्व पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ । तराईमा जनसंख्या बढेको होला तर इलामको घटेको घट्यै छ । अब केद्रिकृत मानसिकताबाट मुलुक चल्दैन । नेपालका जनसंख्याविद्ले जनसंख्याको बारेमा राष्ट्रियस्तरमा छलफल चलाउनुपर्छ । इलाममा सन् २०११ देखि २०१५ सम्ममा २ लाख ९० हजारबाट बढेर २ लाख ९३ हजार मात्रै पुगेको छ जनसंख्या । यसको अर्थ भनेको हामी कमजोर र परावलम्बी हुनु हो । त्यसैले जनसंख्यालाई सन्तुलित राख्न छलपलल हुनुपर्छ ।
समृद्ध नगरका रूपमा पाउँछन् । सुविधासम्पन्न नगर पाउँछन् । नागरिकका इच्छा र चाहना पूर्ण रूपमा पूरा हुन्छन् । स्थानीय सरकार आउँदो यो फलिफाप हुँदोरहेछ भन्ने देख्नेगरी काम गर्नेछौं । (नागरिक दैनिकबाट ।)
२०७५ बैशाख ३ सोमबार १३:१७:०० मा प्रकाशित